Bixinta kulliyad ama jaamacad | khayraadka Education ka USAHello | USAHello
College noqon kartaa mid aad u qaali ah. Waa ay fududahay ardayda USA waxay isku heli la xaddi badan oo deyn ka qiimaha college. Waxaa jira fursado dhowr ah bixinta kulliyadda, Si kastaba ha ahaatee. Baro amaahda dowladda, amaahda ee gaarka loo leeyahay, deeq iyo deeqaha waxbarasho.
Ardayda qaarkood bixiyo college la amaahda dowladda. Arday badan, tani waa meesha ugu horeysa way fiirin marka la bixinayo college. Marka aad codsato deynta dowladda, aad leedahay si ay abaalmarin lacag ah oo dulsaar leh. Taas macnaheedu waxa weeye in aad soo celiso lacag dheeraad ah ku daray. qalin badan oo ku bixiya sano dib u bixinta deynta ardayga ay.
Si aad u codsato amaah ah oo ka socda dawladda, aad leedahay si aad u dhamaystirto ka Codsiga Bilaashka ah ee Gargaarka Ardayga ee Federalka (FAFSA). Buuxinta FAFSA waa mid aad u adag oo lagu wareerayo. Waxaad ka heli kartaa la-taliyaha dugsiga si ay kuu caawiyaan.
Deeqaha waxbarashada iyo deeqaha
Deeqaha iyo deeqaha waxbarasho waa kaalmo dhaqaale oo aan u leeyihiin in dib loo bixiyo. qoysaska dakhligoodu hooseeyo waxay heli karaan deeq ama deeq waxbarasho si ay u caawiyaan bixiyo college. Deeqaha iman kartaa oo ka socda dawladda ama gobolka xukuumadda federaalka. USAHello ayaa liiska deeq loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootiga. Waxaad ka dalban kartaa wax kasta oo deeq waxbarasho ka kulliyad iyo ururka maxalliga ah.
daymaha Private waa deyn ururada (sida bangiyada) ama ka shaqsiyaadka - tusaale ahaan saaxiib ama xubin ka mid ah qoyskaaga. daymaha Private mararka qaarkood dulsaarka aad u sarreeya. Ka hor intaadan go'aansan inaad soo amaahato lacag lacagta college ama kharashka nolosha, waa in aad la-taliyaha dugsiga ama qof ku caawin kartaa oo aad la hadli hubi in aad fahamto amaahda. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan kaararka deynta iyo deyn.
Ardayda qaarkood bixiyo college oo ag maraya dugsiga waqti-dhiman oo shaqeeya waqti-dhiman. Mararka qaarkood, dugsiyada siin doonaa ardayda deeqda in uu oggolaan inay ka shaqeeyaan on campus iyo lacag ka Federaalka Work Study lacag. Ama waxaad ka raadsan kartaa campus shaqo off waqti-dhiman ah in uu leeyahay saacadood dabacsan si aad u iman karin college.
Waxay noqon kartaa mid aad u adag tahay in aad tagtid jaamacadda inta aad shaqada, gaar ahaan haddii aad leedahay qoys. Hubi in aad codsato deeq waxbarasho oo loo marayo FAFSA sidoo.
waxbarashada dadka waaweyn – sida in ay dib ugu dugsiga